Atụmatụ Ọhụrụ zuru ụwa ọnụ maka afọ iri nke ime ihe maka nchekwa okporo ụzọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Atụmatụ Ọhụrụ zuru ụwa ọnụ maka afọ iri nke ime ihe maka nchekwa okporo ụzọ
Atụmatụ na-akwado ndị na-akwado nchekwa okporo ụzọ iji belata ọnwụ na mmerụ ahụ n'okporo ụzọ site na ọtụtụ ọwa, gụnyere ezigbo ọhụụ.
Mwepụta nke atụmatụ zuru ụwa ọnụ n'oge na-adịbeghị anya maka afọ iri nke ime ihe maka nchekwa okporo ụzọ na-egosi akara dị oke mkpa na mbọ na-aga n'ihu iji hụ na ngagharị dị mma maka mmadụ niile. Ndị WHO na kọmitii mpaghara UN mebere ya, yana mmekorita ya na opekempe nke ndị mmekọ 140 na mmekorita ụzọ nchekwa okporo ụzọ UN, atụmatụ a na-akọwapụta ụzọ na-eweta ndụ UN General Assembly mkpebi A/RES/74/299 na “Mmelite Global. Nchekwa okporo ụzọ".
Dị ka WHO si kwuo, ihe karịrị mmadụ 3,500 na-anwụ kwa ụbọchị n'okporo ụzọ zuru ụwa ọnụ - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 1.3 nwere ike igbochi ya na ihe ruru nde 50 merụrụ ahụ - na-eme ka ọ bụrụ onye na-egbu ụmụaka na ndị na-eto eto n'ụwa nile. Enweghị enyemaka ọ bụla, a na-eme atụmatụ na ọnwụ nde 13 na mmerụ ahụ nde 500 ga-eme n'ime afọ iri na-abịanụ.